Dhaadheer Light-saareyaasha & Shirkado cusub - Shiinaha dhaadheer Light Factory
LED dhaadheer Light-Square
LED dhaadheer Light-Iron
LED dhaadheer Light-Aluminum
Laydhka Laydhka LED wuxuu bixiyaa Faa'iidooyinka Galore
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, teknolojiyadda LED -ka ayaa ku koray heer la yaab leh. Nalalka LED-ka ee maanta ayaa ka tayo iyo dabiici-roon sidii hore, qiimayaasha laydhkuna hoos bay u dhacayaan ...
Korontada Common LED
Waxaa jira noocyo badan oo korontada LED ah. Tayada iyo qiimaha sahayda korontada ee kala duwan aad bay u kala duwan yihiin. Tani sidoo kale waa mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee saameeya tayada badeecada iyo qiimaha. Awoodda korontada ee LED guud ahaan waxay noqon kartaa ...
Saddex farqi oo u dhexeeya dhaqa darbiga LED ...
Labada weel ee gidaarka ku shaqeeya iyo iftiinka xarigga adag ee 'LED' waa laydhadh toosan, oo loogu yeero laambadaha toosan ee warshadaha nalka. Si kastaba ha noqotee, dhaqayaasha gidaarka ee LED-ka guud ahaan waxaa loo isticmaalaa nalalka muuqaalka banaanka, iyo lebbiska adag ee ...
About strips LED
Doorashada iftiinka LED (2)
Caqabado ah waxaa la isticmaalayo if Inkastoo ay jiraan badan oo faa'iidooyinka oo aynu doonaa in la hadlayaan dambe, dhowr khasaaraha isticmaalka if-aad Home ama Office. Tusaale ahaan, is dhexgalka ...
Doorashada LED iftiinta a (1)
Waa wakhti wanaagsan in la noolaado lana noolaado Dunidan Casriga ah ee maanta maadaama naloogu duceeyay teknolojiyada LED-ka waxayna soo gaadhay Hillaac Guri iyo Xafiis qaab Dhamaystiran oo Iftiimiyayaal LED ah. Laakiin, befo ...
hoggaamiyo Tri-Caddaynta Light Rikoorka , 900w hoggaamiyo Flood Light, Hogaaminayo nlalaka 30w, Portable hoggaamiyo Flood Light, Garden Flood Light , Philips 3030 hoggaamiyo Flood Light,